Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pemidziyo yekuredza ine mukombe dhayamita 3000 uye kapu dhayamita 4000?
Pane misiyano mitatu pakati pezvikepe zvekuredza 3000 ne4000. Kureba kwetambo yekuredza kwakasiyana mukapu, kumhanyisa kwekugamuchira kwakasiyana, uye huremu hwechikepe chekuredza chakasiyana;
Paunenge uchishandisa magwa ekuredza hove, mhando dzemhando dzezvikepe zvekuredza dzinowanzo nyorwa nemazwi akadai se-xxx-3000 uye xxx-4000. Zvino 3000 uye 4000 apa zvinoreva ma parameter eupamhi hwemukombe. Chii chinonzi mukombe dhayamita? Kana mukombe unotenderera ukatenderera, dhayamita yekunze yemuviri wemukombe inonzi kikapu dhayamita; Kana iyo modhi yechikepe chekuredza ichiiswa ne3000, zvinoreva kuti iyo yekunze dhayamita yemukombe wehove yekukomberedza mukombe ndeye 3cm. Kana iyo modhi ikaratidzirwa ne4000, iyo yekunze dhayamita yeiyo hove chikepe chinotenderera mukombe i4cm; Nekufananidza, kana iyo modhi yechikepe chehove chiri 5000/6000, zvinoreva izvi;
Kunze kwekupa vabati vehove pfungwa yehupamhi hwemukombe, mhando mbiri dzematanho anomakwa dzinogona kuvabatsira kuti vanzwisise zviri nani hupamhi hwemukombe. Ngarava dzekuredza dzine dhayamita dzakasiyana dzemukombe dzinogona kumedza hurefu hwakaenzana hwemitsara yekuredza. Kana ichienderana, iyo mvura inoshandiswa hurumende haina kufanana. Kunyangwe kana hurefu hwetsvimbo yekukanda hwakasiyana, kusarudzwa hakuna kufanana; Pane misiyano miviri mikuru pakati pe 3000 ne 4000 ngarava dzekuredza
Musiyano wekutanga, iwo iwo mutsara mutsara nhamba, 4000 chikepe chekuredza pane 3000 yekuredza chikepe, ichitenderera tambo kureba kwakareba
Makapu akasiyanasiyana emakomputa emidziyo yekuredza anotungamira kune akasiyana marefu eakarukwa hove mitsara. Kune yakawanda ngarava dzekuredza, pachave nemhando dzinoverengeka pamukombe, senge xxx-3000-0.32 / 150. Mune ino nhevedzano yenhamba, XXX ndiro chiratidzo chengarava yekuredza, 3000 inoreva mukombe dhayamita, 0.32 ndiyo yakakurudzirwa inoenderana netambo dhayamita yeiyo hove ngarava, uye 150 ndiyo yakanakisa kureba kwechikepe chehove chakarukwa nemitsetse yekuredza, icho zviri 150 metres.
Sekurehwa, 0.32 ndiyo tambo dhayamita yemutsara 4. Kana iyo tambo nhamba pazasi pemutsara wechina ichishandiswa, iyo yekumhanyisa kureba iri pachena kupfuura mamita zana nemakumi mashanu;
Chaizvoizvo kutaura, nekuti akasiyana hove mitsara vagadziri havagone kunyatsobatanidza iyo dhayamita yemutsara nhamba, uye akasiyana hove dzezvikepe vagadziri vanogona kubatanidza iyo dhayamita yemukombe, asi kudzika kwemukombe hakugone kuenderana. Naizvozvo, akasiyana mabhureki, kunyangwe kana hupamhi hwemukombe hwakaenzana, inofanirwa kunge iine zvikanganiso pakureba kwetambo yekumedza yekuredza. Kana ivo vakashandisa mabrands akasiyana eiyo hove tambo, iko kukanganisa kunotove kwakatonyanya;
Pfupiso: yakakura dhayamita yemukombe wechikepe chehove mukombe, kureba kwetambo iyo inogona kukuvadzwa nehupamhi hwakaenzana nenhamba yemutsara. 3000 ne4000 magwa ekuredza anoshandisa yakafanana nhamba nhamba, uye 4000 zvikepe zvekuredza zvinogona kumeta mitsetse yakareba;
Musiyano 2: 4000 zvikepe zvekuredza zvinotora nekukurumidza kupfuura 3000 zvikepe zvekuredza
Dhayamita yemukombe ndiyo paramende yechipenga chekunze chengarava yekuredza. Mune mamwe mazwi, ihwo hurefu hwedenderedzwa remutsetse wehove wakakomberedza mukombe unotenderera. Ipapo igwa rekuredza rinochinjawo denderedzwa. 3000 magwa ekuredza anotora kumashure 3cm hove yekuraira uye 4000 zvikepe zvekuredza zvinotora kumashure 4cm yekuraura tambo; Nekuda kweizvozvo, zvikepe zve4000 zvekuredza zvinogona kutora nekukurumidza kupfuura 3000 zvikepe zvekuredza;
Izvi zvakakosha zvikuru pakusarudza magwa ehove. Semuenzaniso, isu tinoshandisa zviuru zviviri zvezvikepe zvekuredza kakawanda kupfuura zviuru 3000 zvikepe zvekuredza. Hatizive here kuti zviuru zvitatu zvezvikepe zvekuredza zvinotora nekukurumidza kupfuura 2000 mabhoti ekuredza? Imhaka yekuti 3000 zvikepe zvekuredza zvinotora zvishoma nezvishoma uye zvinoda mabhureki epamusoro; Nenzira iyi, nekumhanyisa uye kunonoka kutora, kurasikirwa kwevhiri vhiri brake kunogona kuderedzwa, uye kugona kwekudzora hove kunogona kuvandudzwa zvinobudirira;
Musiyano uripo wekuti ngarava dzekuredza dzinokwana zviuru zvina inorema zvishoma uye yakakura kupfuura 3000 chikepe chekuredza
Kana hupamhi hwengarava yekuraura hukakura, kudzika kwemukombe wemutsara kunenge kuri kukura zvishoma. Kana huwandu hwemasanhu hwakaenzana, huwandu hwechikepe che4000 chekuredza chinenge chakakura zvishoma pane icho chengarava yekuredza 3000, uye huremu hwacho hungangove hombe;
Nenzira iyi, nekuti kureba, chimiro chemuviri uye nekureba ruoko rwemubati wehove zvakasiyana, zvinogona kushandiswa nematanda marefu akasiyana; Chikonzero cheichi ndechekuti hapana chiyero chemhando dzakasiyana dzemidziyo yekuredza uye hurefu hwakasiyana hwezvimiti zvekuredza;
Misiyano mitatu iri pamusoro apa pakati pechikepe chekuredza 3000 nechikepe chehove 4000 zvinoratidzwa muhondo chaiyo. Zvinogona kunzwisiswa kuti kana nzvimbo yekubata hove yakakura uye hove yakanangwa isiri diki, saka maitiro ekushandisa hove ye4000 iri nani. Mushure mezvose, iine yakafanana nhamba yemutsetse, ngarava yekuredza 4000 inogona kumesa mitsara yakawanda uye kutamba kumberi; Pane kupokana, kana pamusoro pemvura iri diki uye hove yakanangwa iri diki, 3000 magwa ekuredza anokwana.
Post nguva: Jul-09-2021